Iska hor imaad ay ku dhintee Saraakiil iyo Ciiddamo oo dhex maray Maleeshiyadda Alshabaab – idalenews.com
Iska hor imaad ay ku dhintee Saraakiil iyo Ciiddamo oo dhex maray Maleeshiyadda Alshabaab
Wararka ka imaanaya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegaaya in Habeennimadii xalay uu iska hor imaad Dhimasho iyo dhaawac geystay uu dhex maray Ciiddamo ka wada Tirsanaa Maleeshiyadda Alshabaab.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo, ayaa waxa ay sheegayaan in iska hor imaadkaasi ay ku geeriyoodeen ku dhawaad Saddax Sarkaal iyo Ciiddamo Xilligaasi ku sugnaa aaga.
Iska hor imaadka ayaa ka dhashay Ka gadaal Markii ay isku qabsadeen Amiiro sida La sheegay Kawada Tirsan Al Shabaab in Bandow uu Ka dhaqan Galo Gudaha Degmadaasi ayaa taasi waxa ay Keentay in uu Gacan kahadal uu dhexmaro Labadii Hoggaamiye ee kala watay Ciidamadaasi La sheegay in ay Ka tirsanaayeen Xarakada AL Shabaab.
Ilaa iyo iminka Maleeshiyadda Alshabaab ma aysan ka hadlin Dagaalka u dhexeeyay Ciiddamo kawada tirsanaa, waxa ayna wararku sheegayaan in Iska hor imaadkaasi uu ka dhashay Khasaara xoogan oo soo gaaray Saraakiil iyo Ciiddamo labada dhinac ka kala dagaalamaayay.
Nin ka yaabiyay caalamka Daawo Muuqaalka cajiib ah